Buy Mi Note3Dual Camera နဲ့ Black2လုံး Blue. 1 လုံး။ (320,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Mi Note3Dual Camera နဲ့ Black2လုံး Blue. 1 လုံး။
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 197ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 314 (+ 1 )
32နဲ့ခေါ်ထားပါတယ်။တလုံးချင်းစီယူယူ ၃လုံးစလုံးပဲယူယူ ဈေးအဆင်ပြေအောင်လအတတ်နိုင်ဆုံးညှိပေးမယ်။
၃လုံးစလုံး Brand New ပါကင်တွေပါ။
အမြန်ဆုံးရောင်းချင်တဲ့အတွက် ဦးတဲ့သူအတွက် ဈေးကိုအဆင်ပြေအောင်ညှိပေးပါမယ်။
အမည်: Mi Note3Dual Camera နဲ့ Black2လုံး Blue. 1 လုံး။